* Light Of Myanmar *: သံဃာတွေ နိုင်ငံရေးလုပ်ချင်းမှ ကင်းရှင်းပါစေ
Posted by * In Search of Truth * at 9:45 PM
ငါညီတို့က မြင့်မြတ်ပြီး အသိညာဏ်မြင့်မားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ အခုဒီမိုဘုံန်းဘုံန်းတွေဟာ ဘာသာရေးအတွက်လိုလို၊ ပြည်သူအတွက်လိုလိုနဲ့ ဘာအတွက်မှန်းမသိပဲ လုပ်နေပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီဆိုတာဘာလဲလို့ ဘုန်းဘုန်းတွေ မသိပါဘူး။ သူတို့က BBC, DVB, RFA, CNN, FOX တို့က ၀ါဒမှိုင်းတိုက်ထားတဲ့ သတင်းတွေက အကြောင်းအရာတွေကို တကယ်ထင်ပြီး စာတွေလျှောက်ရေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ် လို့ ရေးနေပါလား။ မင်းတို့က လူတော်တွေကိုးကွ။ ဘုန်းကြီးတွေက ဘာမှ အသိညာဏ်မရှိတဲ့လူတွေပေါ့။ဟုတ်လား။ မင်းတို့က လူသိ လူတတ်တွေပေါ့နော်။ ဂုဏ်ယူပါတယ်ကွာ။ တတ်သိလွန်းလို့ ဂုဏ်ယူတာပါ။ ဘုန်းကြီးတွေကတော့ နလပိန်းတုန်းတွေပေါ့။ ဆရာတော် ဦးညာဏိဿရလဲ တစ်ချိန်လုံး နအဖရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို တိုက်ရိုက်တစ်မျိုး သွယ်ဝိုက်တစ်ဖုံဟောနေတာဆိုတော့ သူလဲ ညီလေးတို့ပြောတဲ့ ငတုံး ငအကြီးဘဲ ဖြစ်မှာပေါ့နော်။ ညီလေးတို့က တော်ကြပါပေတယ်။
အခုခေတ်ဟာ နအဖသတင်းစာ လွမ်းမိုးတဲ့ခေတ် မဟုတ်တော့ဘူး ညီလေးတို့။ ကမ္ဘာရွာဖြစ်နေပါပြီ။ ရွာထိပ်က အဖြစ်အပျက်ကို ရွာစွန်က သိနေတဲ့ခေတ်ပါ။ ဘုန်းကြီးတွေကလဲ အရင်လို မဟုတ်တော့ဘူး။ အိုင်တီခေတ်ကို အမှီလိုက်နေကြပြီ။ ဘီဘီစီ တို့ကို အားကိုးနေတဲ့သူတွေ မဟုတ်တော့ဘူး။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သိပ်ပြီး သွေးနထင်ရောက်မနေနဲ့အုံး။
ဘုံန်းကြီးတွေဟာ စေတနာမှန်ပေမယ့် လုပ်ရပ်ဟာလုံးဝ မှားနေပါတယ်။ သာသနာကိုလဲ ထိခိုက်စေပါတယ်လို့ ရေးထားပြန်တယ်။ သာသနာဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာကော ညီလေးတို့ သိပါသလား။ သံဃာတော်တွေ အသတ်ဖြတ်ခံရတဲ့အတွက် အိန္ဒိယမှာ သာသနာကွယ်ခဲ့ပြီပါပြီ။ နအဖဟာ တရုတ်နှုင့်ပေါင်းပြီး တရုတ်ပေးတဲ့အကြံအတိုင်း ဘုန်းကြီးတွေကို သတ်ဖြတ်တာတွေမကဘူး။ ဓားတွေ့တယ် ဘာတွေ့တယ်ဆိုပြီး သာသာနာကို အပုပ်ချ စွပ်စွဲလိုက်သေးတယ်။ ကျောင်းတိုက်တွေကိုလဲ သူပုန်တွေကို ၀င်စီးသလို လုပ်သေးတယ်။ မင်းတို့ တောင်ဥက္ကလာရှိ လူတွေကို သွားမေးကြည့်ပါအုံး။ မင်းတို့ဟာ နိုင်ငံခြားမှာနေပြီး ဘာမှမသိဘဲနဲ့ ပြောချင်သလို ပြောနေတာ အပြောမတတ် ဆဲသလို ဆိုတာလို ဖြစ်နေပြီ။ လူမိုက်အားပေးတဲ့ စကားတွေကိုလဲ သွယ်ဝိုက်နည်းနဲ့ ပေးနေတာပဲ။ ဒါလဲ ပိသုဏ၀ါစာထဲမှာ ပါဝင်တယ် ငါ့ညီတို့။
နအဖဟာ သူ့အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ်ကို ဖျက်ဆီးဖို့ ကြိုးစားလာတဲ့ သူတွေကို ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ရမှာ ဓမ္မတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘုန်းကြီးတွေ အပြုအမူမှားလို့ အခုလိုဖြစ်ရတယ်လို့မြင်ပါတယ်လို့ တောသားနှစ်ယောက်က ပြောပါတယ်။ဆူးလေးဘုရားမှာ တောင်းပန်းနေတဲ့သံဃာတွေကို ဘယ်သူက အရင်စရိုင်းတာလဲ။ မြွေ၊မင်းသားငယ်၊မီး၊ရဟန်းသာမဏေတွေဟာ အဆိပ်ပြင်းတယ်လို့ ဆရာတော်တွေ ဟောတာ ရေးးတာတွေ့ရပါတယ်။ မင်းတို့က ထိုသံဃာတော်တွေကို ရိုက်တာ သတ်တာ အပြစ်မရှိဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်တယ်။ ဘုရားကတော့ အဲသလို မဆုံးဖြတ် မဟောပါဘူး။ ရဟန်းတော်တွေ ဟောတာကိုလဲ မကြားဘူးပါဘူး။ မင်းတို့ဟာ ဘုရားရဲ့ဆရာကြီးလို့ ထင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါသလား။
သံဃာတော်တွေကို မစော်ကားပါနဲ့ တဲ့။ လူကို ခြေထောင်နှင့် မထနိုင်အောင် ကန်ပြီးမှ ဆောရီးဘဲဆိုတာလိုပါဘဲ။ တယ်တတ်နိုင်ကြတာပဲ။ သံဃာတော်များနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆင်ဆင်ခြင်ခြင် ရေးသားနိုင်ရန် စေတနာဖြင့် ပြောရခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း။
မကြိုက်ရင်ရင် ကြိုက်သလို ဆဲဆိုနိုင်ပါကြောင်း။
ရှင်တို့က စီဘောက်မထားတော့ ဒီမှာပဲ ၀င်ရေးရတော့တယ်။ မပြောရင်မဖြစ်တော့လို့.. ရှင်တို့ရဲ့ အရည်မရ အဖတ်မရ ကော်မင့်တွေကို ကျမဆီမှာ လာလာမရေးပါနဲ့။ မျက်စေ့ တော်တော် ရှုပ်လာပီ။ ပီးတော့ ကျမအတွက် အကျိုးလည်း မရှိဘူး။ သူများကို အကျိုးရှိစေချင်ရင်တော့ ရှင်တို့ ကိုယ်ပိုင် ဘလော့မှာပဲ ရေးပါ..။ ကျမအသက် ၄၅နှစ်ရှိတော့မယ်.. ရှင်တို့ ပြောလည်း ကိုယ့် ခံယူချက်နဲ့ ကိုယ်ပဲ.. ဒါကြောင့် ဒီမိုကရေစီသမားတွေပီပီ သူတပါး စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စကို ရပ်တန်းက ရပ်ပါ.. ဒါပါပဲ။
ဒေါ်မေငြိမ်း ခင်ဗျား . . .
ဒီမိုကရေစီဆိုတာ လွတ်လပ်စွာ ဆန္ဒကို ထုတ်ဖေါ်ခွင့်၊ ဝေဖန်ခွင့်ကို ပေးရပါသည်။ သင်၏ တောင်းဆိုချက်သည် ရှက်ဖွယ်ဖြစ်ပေ၏။ နအဖကို သင်တို့က အာဏာရှင်ဖြစ်သည်ဟု စွပ်စွဲထားသော်လည်း မည်သည့် နအဖ ဘလော့မှ သင်တို့ ဒီမိုဘလော့တွေလို အရှက်မဲ့စွာ ဝေဖန်ခွင့်အား ပိတ်ပင်ခြင်းမရှိပါ။ နအဖဘလော့များ၏ ဆီပုံးများတွင် ဒီမိုသမားများ အောက်တန်းကျစွာ ဆဲဆိုနေသည်ကို သင်ကိုယ်တိုင်သိပါသည်။ (သင်ကိုယ်တိုင်ပင် သင်တို့အဖွဲ့သားများမှ နအဖ လူဟန်ဆောင်ကာ သားမယားသဖွယ် အကြိမ်များစွာ အပြောဆိုခံခဲ့ရပါသည်။) သို့သော် နအဖ ဘလော့များ၏ သဘောထားကြီးမှုကို သင်အနေဖြင့် အတုယူခြင်း မရှိသည့် အတွက် ရှက်ဖွယ်ဖြစ်ပေ၏။ ထို့ကြောင့် ကျနော်တို့တောသား နှစ်ယောက်သည် သင်၏ အရှက်မဲ့သော တောင်းဆိုချက်ကို လိုက်လျောမည်မဟုတ်ပါ။ အမှန်ကို ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားခြင်းအတွက် ခံစားရတယ်ဆိုရင် ခွင့်လွတ်ပေးပါ။ တောသားဆိုသည်မှာ တည့်တည့်ပဲ ပြောတတ်ပါသည်။
Prof. Dr. Mg Htai said...
(email ပို့ထားပါသည်။ လိပ်စာလွဲမှာစိုး၍ ကွန်မန့်ရေးလိုက်ပါသည်။ ပို့စ်အဖြစ်တင်ပေးစေချင်ပါသည်။
အများသူငှာ Promotion တွေလုပ်ကြတော့ အားကျမခံ လုပ်လာတာတခုရှိပါတယ်။ Political Promotion ပါ။ Business စတိုင်နဲ့ပေါ့။ လုပ်တဲ့သူက US Campaign မှ ကိုအောင်ဒင်ပါ။ Hollywood Stars တွေက တက်တက်ကြွကြွပါဝင် လှုပ်ရှားနေတယ်လို့ မြန်မာမီဒီယာများမှာ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာဖော်ပြကြပါတယ်။ နောက်မှာက Plan နဲ့ Fund နဲ့ပါ။ ကိုယ့်ထမင်းကိုစားပြီး ဂျီးတော်နွားမကျောင်းကြပါဘူး။ အထူးသဖြင့် US မှာပေါ့ဗျာ။
Mr. Bush က မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူ တတန်းတည်းရပ်တည် အားပေးနေတယ် ပြောသော်လည်း တကယ်က ဝေးလှတဲ့ မြန်မာပြည်က အရေးကို စိတ်မ၀င်စားကြပါဘူး။ ဘယ်သူတွေလုပ်နေမှန်းတောင် US ပြည်သူတွေ ကောင်းကောင်းမသိကြဘူးဆိုပါတယ်။ သည့်အတွက်ကြောင့် လှုပ်ရှားသူများက နည်းလမ်းရှာ နေရပါတယ်တဲ့။ "Activists must figure out how to make Americans care aboutadistant crisis with complex causes involving relatively unknown players." လို့ ဆောင်းပါးရှင် Alex Williams ကပြောပါတယ်။
အခြေအနေအရ မနေသာတော့တဲ့အတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆန်တဲ့ Brand-Up Plan ကြီး စကြရပါတယ်။ ကိုအောင်ဒင်အဖွဲ့ရဲ့ ပါတနာလည်းဖြစ်၊ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တခုရဲ့ တည်ထောင်သူ လည်းဖြစ်တဲ့ Jack Healey က “Inacertain sense, you have to ‘brand’ it up, it’s the nature of the business now.” လို့ဖွင့်ဟ သွားခဲ့ပါတယ်။ စီးပွားရေးဆန်ဆန်လုပ်ရတာဆိုတော့ အကျိုးအမြတ်ပါ အလေးအနက်စဉ်းစား လာကြပါတယ်။
ငွေရင်းကို ဘယ်သူစိုက်ထုတ်တယ် မသိရပေမယ့် (ဇာတ်လမ်းတိုများ အပါအ၀င်) CD၊ DVD၊ Games များရောင်းချရမှုထဲက ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကိုပဲ ကိုအောင်ဒင်တို့ US Campaign for Burma အဖွဲ့က ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ US မှာထောက်ခံလှုဒါန်းမဲ့ မြန်မာပြည်သူနည်းပါးတာလည်း တပိုင်းပါတာကြောင့် အထွေထွေအသုံးစရိတ် ခွင့်ပြုနိုင်စွမ်းကို နာမည်ကျော် ဒါဖာကန်ပိန် ကုန်ကျစရိတ်နှင့် "The campaign’s total budget would “not equal one week of Darfur’s budget." လို့ ယှဉ်ပြသွားခဲ့ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ဖြစ်သမျှလေး အလဟဿမဖြစ်ရအောင် ကိုအောင်ဒင်တို့အဖွဲကလည်း အမြင်ကျယ်ကျယ်ထားပြီး မိမိတို့နဲ့ သဘောညီတဲ့ နာမည်ကျော်များကိုသာ စနစ်တကျ ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ ဓမ္မဓိဌာန်ကျတဲ့ အမြင်တွေပါမလာရအောင်၊ လိုတိုရှင်းနဲ့ သူတို့ပေးထားတဲ့ အချက်အလက်များကိုပဲ ပြောဆိုပြီး စိတ်ဝင်စားမှုရယူနိုင်အောင် စားသုံးကုန်ပစ္စည်း ဈေးကွက်တင်သူတွေလို၊ ထောက်ပံ့ရေးအေဂျင်စီတွေလို Brand-building နည်းဗျူဟာများ သုံးစွဲပြီးရွေးချယ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း ဒီလိုပြောပြသွားပါတယ်၊ "The Burma campaign has decided to use some of the same brand-building strategies — simplified narratives, clear-cut imagery and, of course, the most carefully selected celebrities — used by other successful aid agencies, or even consumer-goods marketers"။ နိုင်ငံရေးလည်း ကြော်အောင်ငြာတာနဲ့ မကင်းနိုင်ရှာတော့ပါဘူး။
သူတို့ အဓိကရည်ရွယ်တာကတော့ Celebrities များက တက်တက်ကြွကြွ သံပြိုင်ညီညာနဲ့ ချက်ချင်းအရေးယူလုပ်ဆောင်ပေးရန် ဟစ်ကြွေးကြဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ "All withachorus of earnest celebrities crying “Urgent!" ပါတဲ့။ ဟစ်ကြွေးချင်ကြအောင်လည်း အကုန်အကျခံထားရပါတယ်။
သို့သော် ခေတ်ပေါ် Promotion ရေစီးကြောင်းထဲမှာ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုပဲ အောင်မြင်မှုတွေရအောင် လုပ်နိုင်လုပ်နိုင်၊ ကိုယ်လိုရာသရုပ်ဖော်ချက်တွေနဲ့ ဘယ်လောက်ပဲ ကြိုးစားကြိုးစား၊ နောက်ဆုံးမှာ US ပြည်သူတွေက စိတ်မ၀င်စားပဲ၊ "that lady in Burma," လို့ပြောနေဆဲဆိုရင်တော့ "then you’ve got nothing" ပါလို့ ပါဝင်လုပ်ဆောင်သူတယောက်က သတိပေးသွားကြောင်းပါ ခင်ဗျာ။
ကန့်လန့်ကာနောက်ကွယ်ကို စာဖတ်သူများ ထွင်းဖောက်မြင်နိုင်ကြပါစေ၊
ပရောဖက်ဆာ ဒေါက်တာ မောင်ထိုင်း
မှတ်ချက်။ လိုအပ်သောအချက်အလက်များကို Alex Williams ၏ NY Times ဆောင်းပါးမှ ရယူပါသည်။